UDan Corder ozosingatha uhlelo lwasekuseni ku-5FM | Scrolla Izindaba
UDan Corder ozosingatha uhlelo lwasekuseni ku-5FM
Ready player 5.
Player profiles upgraded.
Your new weekday lineup: pic.twitter.com/cGw8EFFDQJ
— 5FM (@5FM) March 31, 2021
Iziteshi zomsakazo ezweni lonke zimemezela izinguquko zazo zaminyaka yonke manje – futhi asikho esikhulu kune-5FM esamemezele ukuthi uDan Corder we-Good Hope FM uzothatha uhlelo lwasekuseni.
“I-5FM ibilokhu iyisiteshi somsakazo esiphole kunazo zonke,” kusho uCorder.
“Yisiteshi sesikhathi esizayo. Ngokubambisana nabalandeli bethu abaqotho be-5FM ngingawenza lo msakazo ube ngowamaphupho ami.”
Abanye abasele beqembu le-breakfast kuzoba nguMathapelo Moloi ezindabeni, uMarli van Eeden ku-Traffic noXoli Zondo kwezemidlalo.
Isitatimende esivela ku-5FM sithe banethemba lokuthi uhlelo lwabo olushintshiwe luzongeza amathalente amasha kule renki.
Ohlwini lwabo lonke kukhona uZanele Potelwa ozothatha indawo yantambama phakathi nesonto kusuka ngo-12 emini kuya ku-3 ntambama kanti uRoger Goode uthatha indawo ka-6pm kuya ku-7pm phakathi nezinsuku futhi uzosingatha uhlelo olude lohlelo lwakhe lwangoLwesihlanu kusuka ngo-7pm kuya ku-10pm.
I-Motsweding FM nayo imemezele izibuyekezo ezincane zohlu lwayo.
“Uhla lwamanje ludinga ukuthi kugxilwe kakhulu kumasiko, ubunikazi, ukulondolozwa kanye nokuthuthukiswa kwamagugu e&Setswana,” kusho isitatimende.
Uhlelo olusha abalwengezile kube yi-‘Konka Club Mix ‘entsha yo-DJ esethelwe amahora amabili, nehora elilodwa elizobanjwa uDJ kanye nabanye oDJ abamenyiwe.
ULuthando Soshsa noPearl Modiadie bamemezele ukuphuma kwabo ku-Metro FM.
Umthombo wesithombe: @DanCorderOnAir
Umthombo wevidiyo: @ 5FM